5 Star Hotel oo ku yaal Çambaşı Plateau RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 525 Star Hotel oo ku yaal Çambaşı Plateau
19 / 09 / 2019 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
Dhismaha hudheelka xiddig ee buuraha ku yaal ee Cambasi si dhakhso leh ayuu u kordhayaa
Hoteelka xiddigta '5 hotel', oo lagu bilaabay hoggaanka ORBEL A.Ş, oo ah shirkad hoos timaad degmada Ordu Metropolitan District, iyo warshadaha Ordu ee Warshadaha iyo Ganacsatada (ORDUSİAD) oo ay samayso Çambaşı Yatırım A.Ş., ayaa si aan kala go 'lahayn u socota.
HALO WUXUU KUGU SII DHIINI DOONO BARNAAMIJKA
Hoteelka xiddigta '5 hotel' wuxuu sii wadayaa inuu ka sii shaqeeyo gobolka oo ka tarjumaya qaab dhismeedka Duqa Magaalada Dr. Ordu. Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, ÇambaÇ Plateau waa qolka martida ee Ordu. Markii hudheel la dhiso, meeshani waxay lahaan doontaa qurux qurxoon. Hoteelka socda ee 5 wuxuu ka tarjumayaa qaab dhismeedka gobolkayaga. Hoteelka, oo la dhammeyn doono waqti gaaban, ayaa la dhexgali doona isboortiga barafka isla markaana kor u qaadaya barxada dalxiiska Ordu. Waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka gaysatay maalgashigan muhiimka ah. ”
Duqa Magaalada Güler wuxuu bixiyay warbixin ku saabsan hudheelka laga dhisi doono dhulkoobka 40 acres. “30% qiimaha hudheelka 70 waxaa la kulmay tabaruca ganacsatada Ciidanka. Ganacsadeena ciidanku waxay gacan ka geystaan ​​shaqada aad u wanaagsan iyagoo ka wakiil ah Ciidanka. Hoteelka xiddigta '40,' oo laga dhisi doono dhul heersare ah oo loo yaqaan '5 acres', wuxuu ka kooban yahay qolalka 80 iyo awoodda sariirta 110. Huteelka ayaa loo dhisay hab casri ah shaqaduna wali way hakataa ..
“TABABARKA AYAA UU KU DHAQAN KARA FUUQADAHA FOOTBALL”
Isagoo hoosta ka xariiqaya horumarka dalxiiska ee Ordu maalin kasta oo dhaafaysa, Duqa Magaalada Ordu Metropolitan Municipal. Mehmet Hilmi Güler wuxuu yidhi, imiz Hadafkeenu maaha inaanu noqonno magaalo leh maqaallo bille ah oo 3 ah, laakiin inay noqoto magaalo dalxiis bille ah. Sidaa darteed, waxaan ka shaqeynaynaa inaan "ÇambaÇ" ka sii dhigno mid waxtar badan leh. Dawladda hoose iyo ganacsatada oo kaashanaya dhismaha hudheelka ku xigga dhismaha naadiyada kubbadda cagta ayaa laga dhisi doonaa agagaarka garoonka tababarka. Markii meeshani dhamaato, naadiyadayada kubbadda cagta waxay noqon doonaan meelaha ugu jecel. Hadafkayagu waa inaan horumarinno dalxiiska isboorti ee gobolkayaga ..
5 Star Hotel waxaa laga aasaasay Çambaşı
Dhismaha Buundada Ayaa Soo Kordhaysa Manavgat Değirmenli
RayHaber 19.09.2019 Warbixinta Shirka